“Burma” ဟုသာ ဆက်သုံးမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော | ဧရာဝတီ
“Burma” ဟုသာ ဆက်သုံးမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
ဧရာဝတီ| November 23, 2012 | Hits:439
6 | | တခြား အစိုးရများက မြန်မာနိုင်ငံကို ယခင်စစ်အစိုးရ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည့် အတိုင်း “Myanmar” ဟု သုံးနှုန်းနေခြင်း အပေါ် စိတ်ပျက်မိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ “မြန်မာပြည်သူတွေက သူတို့ခေါ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း ဆုံးဖြတ်တဲ့ ကာလအထိ ဒီနိုင်ငံကို ကျမကတော့ “Burma” လို့ပဲ အမြဲ ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမှာပါ” ဟု နေပြည်တော်တွင် နယူးဇီလန် ဝန်ကြီးချုပ် ဂျွန်ကီးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုကြောင်း သိရသည်။ သြစတြေးလျ အခြေစိုက် ဆစ်ဒနီ နံနက်ခင်း သံတော်ဆင့် သတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန်အစိုးရတို့က မကြာသေးမီကပင် မြန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင် “Myanmar” အသိအမှတ်ပြု ပြောင်းလဲသုံးနှုန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်က ကချင် ဒုက္ခသည်များ ပြန်ပို့နေမှု ကုလသမဂ္ဂ စိုးရိမ်
နယ်ခြားမျဉ်း တိုင်းတာမှု နမ့်ခမ်း ဒေသခံများ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
ကာချုပ်နှင့် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံ
လှေစီးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြော
11 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website bwetphyu November 23, 2012 - 3:56 pm	I against burma, Myanmar – right
Reply	Jan Jan November 23, 2012 - 4:48 pm	ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် အန်တီစု …
ဘယ်လောက်မှတော့ နာမည်အသုံးအနှုန်းကြောင့်သက်ရောက်သွားခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမယ့် Burma ဆိုတာ ကိုလိုနီခေတ်က အသုံးဖြစ်လို့ မခေါ်စေချင်တော့ဘူး။ ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆန္ဒပါ။ 🙂
Reply	Kg November 23, 2012 - 11:57 pm	Right. Burma represent mainly bamar ethnic. So myanmar is most favourable term for our country. In addition, it is created by british colonists. We are now independent nation. So, please stop calling that name. This is against our honour. I wonder why she still want to accept that name. Because the military junta created the new name? she still had anti military mind set? If so, i feel sorry. This is not the time for internal conflict. This is the time to rebuild trust between our people, strengthen our economy and living standard. This is time to raise our national honour.
Reply	mr TM November 23, 2012 - 8:25 pm	နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက်(ဘယ်လောက်မှတော့နာမည်အသုံးအနှုံးကြောင့်သက်ရောက်သွားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်)လူမျိုးတမျိုးအတွက်ကြတော့ဘာကြောင့်သက်ရောက်မှုရှိရတာလဲ။ဒီမိုကရေစီခေတ် မှာကိုလိုနီစနစ်မရှိသင့်တော့ပါဘူး။
Reply	Throne November 24, 2012 - 1:30 am	I never accept these name,”Burma”asaethnic one because of all ethnic group survive in Myanmar,not only Burma who has been noticedaMajority and is known Burmese, not Myanmar by all over the world.what is different Burma and Myanmar?
firstly, without portrayingapicture of the country scenario which is mentioned both the two names are same but as if we recognize my country named as BURMA where community innocent people are only Burma. Sure to be example that if i visit to oversea where foreigner will ask ” where are you from” i easily speak ” i am Myanmar” but i never talk Burma Because of i am no Burma.
secondly, we researched name BURMA that had absorbed and undermined to society, cultural and increasing populations of ethnic.So my country present BURMA populations is most increasing and Ethnic populations is lower and eroded continuously as silent ethnic cleansing.
thirdly, we had to be remorse on Penglong agreement so we didn’t believe Burma leader and looked at critique.Burma people look like ethnic people but for example some NLD leader were very sensitive talking about Burma chronicle
as their head were from side to side that i remarked them as chauvinist.
finally, i love this country Myanmar and all people and always proud of my land as big areas, beautiful land, lot of resources, going on Democracy that is owned by unity. Myanmar, no ethnic region, is weaken so our main key is unity.
what is my essential democracy leader creating problem and pushing to ethnic groups again to appear revolution to separate Myanmar.?
I don’t like this name Burma .
Reply	kyawseinwim November 24, 2012 - 6:58 am	both right Burma or Myanmar
Reply	Riyaz November 25, 2012 - 10:30 am	Burma iS RigGht
Reply	Aung Kyaw Nyunt November 24, 2012 - 5:41 pm	I am really sorry to hear that ASSK wants to stick BURMA given by Colonial British instead MYANMAR. Yes, MYANMAR was the name of the country evolved during the Military ruling, however we have to reason ourselves it was acceptable or not. We should not reject suddenly because of the adoption during the dictator ruling. Majority of the people may like the name MYANMAR. If this is considered controversial, this can be assessed legally in the parliament.
Reply	mr TM November 24, 2012 - 7:18 pm	လွတ်လပ်ရေးရကတဲကမြန်မာနိုင်ငံကိုအဂ်လိပ်လိုUnion Of Burma လို့သုံးပြီးမြန်မာလိုပြည် တောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့သုံးခဲ့တာပါ၊ International အသိုင်းအဝိုင်းမှာBurma လို့ဒေါ်စုသုံးတာဘာမှားသလဲ၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသုံးခဲ့တဲ့ပြည်တောင်စုလိုအဓိပ်ပါယ်ပေါ်တဲ့အ လံကိုဗိုလ်နေဝင်းကဆိုရှယ်လစ်အလံနဲ့လဲခဲ့တယ်၊အဲဒီအလံကိုဗိုလ်သန်းရွှေကဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ပေးတဲ့……..အစမှာကြယ်ဖြူတလုံးတပ်ပြီးအလံထောင်ပေးခဲ့တယ်။အဲဒီအလံကိုမင်းတို့ အလေးပြုနေကြတာဘဲ၊မင်းတို့မှာသတ္တိမရှိဘူးဒေါ်စုမှာသတ္တိရှိလို့ Burma လို့သုံးနေတာဒေါ်စုသုံးထားတဲ့စကားလုံးကိုပြန်ကြည့်ဦစို့(မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့ခေါ်ဆိုချင်တဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်တဲ့ကာလအထိကျမကတော့Burma လို့ဘဲအမြဲရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုမှာပါ)ပြည်သူတွေရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုတန်ဘိုးထားတာပါ။
Reply	ကိုဒေါသ November 24, 2012 - 11:38 pm	ကဲ..တော်ကြပါတော့ဗျာ။ မြန်မာဖြစ်ဖြစ်၊ ဗားမားဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်ရဲ့ဆိုးမွေ၊ကောင်းမွေတွေကြောင့် ကျုပ်တို့ပြည်ကို ကမ္ဘာကလည်းသိနေကြလောက်ပါပြီ။ UK,GB,England,Britain တဲ့။ ပြီးတော့ America,US,USA တဲ့။ Holland,Netherland တဲ့…ကဲဘာပြောကြဦးမလဲ။ ကိုယ်ကြိုက်သလိုသာခေါ်ကြပါစို့ရယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ စကားလုံးနဲ့အကျအနကောက်နေကြမဲ့အစား တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးကိုပဲ အာရုံစိုက်ကြပါစို့။ တကတဲ…ရှုပ်နေတာပဲ။
Reply	ကောင်းစေချင် November 26, 2012 - 11:37 pm	မြန်မာကိုမြန်မာလို့ခေါ်တာဘာများနာနေရတာလဲဗျာ၊ရန်ကုန်ကို RangoonအစားYangonလို့ခေါ်တာအဆင်ပြေအားလုံးလက်ခံနေတာပဲ၊စစ်အစိုးရခေတ်ကဘာလုပ်လုပ်ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ရာကနေဒီကိစ္စဖြစ်လာရတာ၊ အခုထိ အရစ်မရှည်သင့်တော့ပါ။
လက်ခံနေပါပြီ၊ India မှာလည်း Calcutta ကိုKholcutta လို့သုံးနေပါပြီ။
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် စစ်ရေးဆက်သွယ်မှုဖြတ်ရန် မြန်မာကို အမေရိကန်တိုက်တွန်း